Geet Sangeet | Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more - Part 38
लोकगायिकाको बढ्दो ब्यस्तता : को को हुन् स्टेजमा बढी रुचाईएका गायिकाहरु ?
अहिले पहिलेको तुलनामा गीतका सिडीहरु बिक्री हुँदैनन् । न त, कुै कम्पनीले एल्बम खरिद नै गरिदिन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि गायक, गायिकालाई खासै चिन्ता छैन । किनकी उनीहरु स्ट..
सिन्धुपाल्चोकमा विद्यालय बनाउन कलाकारको टोली पुग्यो डेनमार्क
नेपाली कलाकारको एउटा टोली डेनमार्क पुगेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा एउटा विद्यालय बनाउनका लागि नेपाली समाज डेनमार्कले आयोजना गरेको साँगीतिक कार्यक्रममा भाग लिन कलकारहरु डेनमा..
६ बर्षपछि गायक भरत सिटौलाको कमब्याक : कता भुल्लिएका थिए यत्तिका बर्ष ?
भरत सिटौला अहिले आफ्नो नयाँ एल्बम “फेरी भेटौँला”को तयारीमा छन् । यसका लागि ४ वटा गीत फाईनल भईसकेका छन् । अरु बन्नेक्रममा छन् । यसै एल्बमका लागि तयार गरिएको “बैँशमा..” ब..
डिजेईङ संगीतकै अर्को बिधाको रुपमा विकास भईरहेको छ : डिजे राजु
डिजे राजु २० बर्ष भन्दा बढी समयदेखि डिजेईङ क्षेत्रमा छन् । उनले क्लबमा नचाउने बाहेक केही गीतहरु रिमेक पनि गरेका छन् । उनको च्याङ्बा होई च्याङ्बा, तिम्रो त्यो हँसिलो मुह..
गायक भरत सिटौलाको ६ बर्षपछि नयाँ गीत : वैँशमा मै पनि घोर्ले
पप गायक भरत सिटौला आफ्नो नयाँ एल्बमको तयारीमा जुटेका छन् । फेरी भेटौँला नाम दिईएको उनको आगामी एल्बमका लागि ३ वटा गीत बनिसकेको छ । पछिल्लो चोटी २०६६ सालमा एल्बम निकालेका..
क्यालिफोर्नियमा शिला आलेको प्रस्तुती हेर्न दर्शकको ओईरो
लोकगायिका शिला आलेले अमेरीकाको क्यालिफोनिर्यास्ति सन्नीलेभ शहरमा सांगितिक प्रस्तुती दिएर धमाका मच्चाएकी छिन् । जनवरी ३० मा भएको सन्नीभेल रमाझमा साँझमा उनले गीत प्रस्तुत..
नाकाबन्दी गर्ने भारतलाई महजोडीको धन्यवाद छ
“धन्यवाद छ छिमेकी धन्यवाद छ है, छ्याङ्गै ऐना देखाईदियौ नाकाबन्दीलाई धन्यवाद छ नेपाल हेर्ने तिम्रो आँखालाई तिम्ले भन्दा माया गर्छौँ हाम्ले मधेसलाई धन्यवाद छ छिमेकी धन्यवाद छ है ।” हाँस्यकलाकारद्धय मनदकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले, नाकाबन्दी र नेपालको अस्तब्यस्त स्थितीलाई ब्यङ्ग्य गर्दै यो गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । हरिवंश आचार्..
पलसँग उड्न चाहन्छिन् कुञ्जना
सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे रिलको मात्र होइनन् रियल लाइफका पनि जोडी हुन् । हाँस्य कलाकारको यो जोडी सामाजिक काममा होस् वा हाँस्य कार्यक्रममा सँग सँगै देखिन्छन् । तर सुन्तली अर्थात कुन्जना घिमीरेले मोडलिङमा पनि राम्रो गरिरहेकी छिन् । हालै मात्र उनले आई लव यु बोलको गीतमा अभिनय गरेकी छिन् जसको चर्चा निकै बढीरहेको [&hel..
७२ सालले उत्तानो पारो
गायक पशुपती शर्माले २०७२ मा घटेका सबै घटनाहरुलाई समेटेर एउटा गीत तयार पारेका छन् । देशमा भईरहेको समस्यालाई जस्ताको त्यस्तै गीतमा उतार्न सिपालु छन् ,पशुपती शर्मा । पशुपतीले हिड्दाहिड्दै लेखेको यो गितले हाल निकै चर्चा पाईरहेको छ । गीतमा पशुपती शर्माको लय र शब्द रहेको छ भने गायनमा उनलाई साथ दिएकी छिन् गायिका जानकी तारामी […]
सुन्तली र पल शाहको प्रेममा धुर्मुसले के गरे ? (भिडियोसहित)
सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे रिलको मात्र होइनन् रियल लाइफका पनि जोडी हुन् । हाँस्य कलाकारको यो जोडी सामाजीक काममा होस् वा हाँस्य कार्यक्रममा सँग सँगै नै देखिन्छन् । तर, सुन्तलीले क्युट मोडल तथा नायक पल शाहलाई आई लभ यु भनेपछि उनी मख्खै परेका छन् । दिनेश थपलियाको गिती एल्बम सारांश २ मा समावेश […]
विदेशमा भोग्नु पर्ने दुख बोल्ने अर्को गीत (भिडियोसहित)
वैदेशीक रोजगारका जाने नेपालीको संख्या बढ्दै गर्दा गायक कुलेन्द्र विकले नेपालमै बस्न युवाहरुलाई आग्रह गरेका छन् । स्वदेशमै बसेर पनि राम्रो कमाई गर्न सकिने भन्दै उनले गीत मार्फत आम नेपाली युवासँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् । हिरामोति बोलको गीतमा उनले विदेशमा नेपालीले भोग्नु पर्ने पिडाका शब्दहरु पनि बोलेका छन् । गीतमा कुलेन्द्र विक र क..
गीत गाएर १५ वर्षको उमेरमै साढे तीन लाख कमाउने अवसर
सुरशाला आइडल जुनीयर प्रतियोगीताको माघ १६ देखि अडिशन सुरु हुने भएको छ । गीत संगीतमा रुची भएका नयाँ पुस्ताले अडिशनमा भाग लिन सक्ने छन् । काठमाण्डौँ, भक्तपुर, पोखरा, चितवनलगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नयाँ प्रतिभालाई खोजी गर्नका लागि प्रतियोगीता गर्न लागीएको सुरशाला म्युजीक एकेडेमीले जनाएको छ । प्रतियोगीतामा पहिलो हुनेलाई..
जाडोमा ज्योति मगरले गरीन् सिरक तानातान
ज्योति मगर नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रमा स्थापित नाम हो । अहिले उनलाई लोक दोहोरी गायिका भन्दा बढी मोडलको रुपमा चिनिन्छ । छोटा पहिरनमा नृत्य गर्न नलजाउने ज्योतिको नयाँ गीत सिरक तानातान सार्वजनीक भएको छ । केहि साता अघि सार्वजनीक भएको गीतले युट्युबमा राम्रो दर्शक पाएको छ । अहिले सम्म करिब साढे ३ लाख दर्शकले ज्योति […]
थाहा पाउनुहोस्, कस्को जीउलाई माया गर्छिन्, मुना थापा मगर ?
लोक दोहोरी क्षेत्रमा चलेको नाम हो मुना थापा मगर । मिठो स्वरकी धनी मुनाको स्वर मन नपराउने सायदै होलान् । लोकप्रयताको शिखरमा पुगेकी मुनाले भने आफ्नो भन्दा अरु कसैको जीउको माया लाग्न थालेको बताएकी छिन् । रुदै मेला पातैमा बोलको गीतका लागि उनले यस्तो बताएकी हुन् । नकुल ढकालका शब्दमा मिठो स्वर भर्दै मुनाले दुध […]